🥇 ▷ La kulan 5 Barnaamij Aasaasi ah oo loogu talagalay waalidiinta markii ugu horeysay ✅
La kulan 5 Barnaamij Aasaasi ah oo loogu talagalay waalidiinta markii ugu horeysay
Waxaan dooranay barnaamijyo waalidnimo oo kaa caawinaya inaad ka gudubto marxaladaha hore ee ilmaha, laga bilaabo trousseau illaa buug-yaraha tallaalka
Waalidkii ugu horreeyay Waxaad u baahan tahay inaad walwaasho waxyaabo badan hal mar. La-qabsigaaga jadwalkaaga iyo barashada hore ee ku saabsan sida loo daryeelo ilmaha waxay noqon kartaa mid daal iyo dhibaato leh.
Si kastaba ha noqotee, tikniyoolajiyaddu waxay noqon kartaa xulle. Qofka reer Brazil ayaa durbaba isticmaala 2 kun oo dalab maalin walba way kala duwan yihiin, sida lagu sheegay sahan laga soo qaaday Panorama Muuqaalka Waqtiga / Fikirka Fikradda, iyo dhexdooda, waxaan go’aansanay inaan ka faa’ideysano Aabaha Maalinta Sabtida si aan u liis-gareyno 5 Barnaamijyo Waalid oo kuu fududayn kara noloshaada – iyo cunuggaaga! Baadhid:
Adigoo raacaya Baby Tracker, waad raadin kartaa oo duubi kartaa macluumaadka canugga qaarkood.
Baby Tracker waa App u shaqeeya sida a Xusuus-qorka guud ee horumarka ilmaha. Waxay bixisaa hab fudud oo lagula socdo caadooyinka maalinlaha ee ilmaha, caafimaadka iyo isbeddelka heerka guriga.
Waalidku wuxuu awood u yeelan doonaa inuu duubo quudinta, isbeddelada xafaayadda iyo qaababka hurdada, iyo sidoo kale qoraallo iyo sawirro faahfaahsan. App-ka ayaa waliba oggol in lala wadaago macluumaadkan dhakhaatiirta, daryeelayaasha, asxaabta iyo qoyska.
Appku wuxuu leeyahay taageero afaf badan oo ay ku jirto Boortaqiiska, waa bilaash ah, laakiin leh nooc Pro ah. Loo heli karaa Android iyo macruufka.
Haddii aad qabtid wax su’aalo ah oo ku saabsan sida loo aqoonsado qandho, Fever Tracker waxaa laga yaabaa inay tahay ikhtiyaar.
Fever Tracker waxaa soo saaray dhakhaatiir si ay gacan uga geystaan ​​la socodka qandho iyo astaamaha kale, ka caawinta waalidiinta baranaysa sidii ay ula tacaali lahaayeen ilmaha.
Waa suurtagal in la qoro wax ka badan hal qof, markii calaamadaha ugu horreeyay soo muuqdeen, heerkulka jirka ayaa sarreeya iyo jadwalka daawada. Waxay kaloo oggolaaneysaa la wadaagga macluumaadkan dhakhaatiirta carruurta iyo xubnaha qoyska.
App waa bilaash ah, laakiin waxaa laga heli karaa oo keliya on Ingiriis iyo Android.
Grabr wuxuu ka dhigaa dukaameysiga caalamiga ah mid fudud
Imaatinka cunugga wuxuu u baahan yahay xoogaa kharashyo ah, waxyaabo badan oo lagama maarmaan ahna way ka jaban yihiin halkaas. Grabr waa codsi taas ka dhig adeegsiga mid sahlan Dibedda, ajuuro qarsoon iyo inaanad wadankaaga ka tagin. Waxaad ka dalban kartaa wax uun wixii ku saabsan the Grabrlaga bilaabo dharka ilmaha iyo waxyaabaha caruurtu ku ciyaaraan ilaa qalabka elektiroonigga ah iyo kaabayaasha nafaqada leh.
Waxyaabaha ugu badan ee lagu dalbado app-ka waxaa ka mid ah dharka, qalabka dhejiska lagu ciyaaro iyo waliba korjoogteha ilmaha. Moodellada aaladaha kaameeradda ee dalka Brazil waxay ku kici kartaa ku dhawaad ​​$ 800 reais – halka dibada, isla moodalkaas wuxuu qaadaa celcelis ahaan $ 99 dollars.
Si aad u sameysato iibsashada-app ah, u samee amar wax soo saar la doonayo oo ku dar faahfaahinta muhiimka ah sida meesha uu socdaalku ka adeegan karo iyo qiimaha badeecada. Amarkani wuxuu heli doonaa dadka safra, qof kasta oo sameyn karana soo iibsashada wuxuu la xiriiri doonaa iibsadaha si uu u diyaariyo faahfaahinta.
O Grabr Waxay si otomaatig ah u xisaabineysaa dhammaan canshuuraha iyo khidmadaha la dabaqi karo, oo ay ku jiraan abaalmarinta lacageed ee iibsaduhu oggolaado inuu siiyo safarka bixinta sheyga. Codsiga wuxuu ansaxinayaa siyaasad ah lacag celin haddii iibsaduhu uusan helin iibsashada ama uusan ku helin badeecada xaalad xun. Loo heli karaa Android iyo macruufka.
Haddii aad tahay aabbe aabihiis oo aadan garanaynin sida ilmahaagu u seexdo, Sleepy Sounds wuxuu leeyahay heesaha ugu fiican ee lagu dejiyo.
O Codadka hurdada waa barnaamij ka caawin kara waalidiinta deji dhallaankaagaLaakiin waxaa loo isticmaali karaa dadka hurdo la’aanta. Waa diyaar afar ikhtiyaar siyaabo: lullabies, dhawaaqyada cad, dhawaqa dabiiciga ama taada muusig.
Intaas waxaa sii dheer waaliddiinta ayaa astaysiin kara wicitaannada iyagoo sidoo kale dooranaya muddada waqtiga lagu jiro ama inay si aan xad lahayn u ciyaarayaan. In kasta oo muusiggu ciyaarayo, app wuxuu sidoo kale ku siinayaa ikhtiyaarka inaad u shaqeyso sida iftiinka habeenkii, barnaamijyada animations ku baahiya shaashadda telefishanka.
App waa bilaash ah waana loo heli karaa Android iyo macruufka.
Haddii aadan maamuli kareynin tallaallada aad u baahan tahay inaad qaadatid, Tallaalka Maalinta ayaa caawin kara.
Talaalku waa codsi uu soo saaray Wasaaradda Caafimaadka inay ka caawiyaan muwaadiniinta inay la socdaan talaaladooda iyaga oo aan u baahnayn inay la tashadaan buugga tallaalka.
Waxay waxtar u leedahay waalidiinta doonaya inay abaabulaan jadwalka tallaalka ee wiilkaaga. Barnaamijku wuxuu bixinayaa macluumaad ku saabsan ololaha talaalka SUS waxaana sidoo kale suuragal ah in la duubo qiyaasta tallaalka la siiyay cunuggaaga, adiga oo siinaya inaad si fiican u maareyso tallaallada uu ilmahaagu qaadan karo ama u baahan yahay inuu qaato.
App-ku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad iska diiwaangeliso illaa toban buugaag xusuus qor ah Tallaalka Waxaa loo Heli Karaa Android iyo Macruufka.
Sidoo kale akhri qodobkayaga ku saabsan hooyooyinka da’da digital: